Zanak’i Fianarantsoa : Nampiseho firaisan-kina ireo avy amin’ny Faritra 5 -
AccueilSongandinaZanak’i Fianarantsoa : Nampiseho firaisan-kina ireo avy amin’ny Faritra 5
Zanak’i Fianarantsoa : Nampiseho firaisan-kina ireo avy amin’ny Faritra 5
05/02/2018 admintriatra Songandina 0
Nifampiarahaba tratry ny taona teny amin’ny A&C Ivato ireo zanak’i Fianarantsoa ny sabotsy lasa teo. Firaisan-kinan’ny faritanin’i Fianarantsoa no tanjon’ity hetsika ity.
Hita taratra ny firaisan-kina tamin’izany, satria dia nahatonga solontena 150 avy ireo zanaky ny Faritan’i Fianarantsoa. avy ao amin’ireo Faritra 5 mandrafitra izany dia i Amoron’i Mania, Vatovavy Fitovinany, Matsiatra Ambony, Atsimo Atsinanana, Ihorombe. Saika tazana nandritra io fihaonana io ireo olona manana ny toerany avy any amin’io faritany, ireo olomboafidy sy olomboAtendry mitana andraikitra maro eto amin’ny firenena. Ny loholona no sady filoha lefitry ny antenimieran-doholona Riana Andriamandavy VII, izay isan’ny mpikarakara ity hetsika ity dia nanamarika fa “vonona hitondra ny anjara birikiny amin’ny drafitra « Fisandratana 2030 », natolotry ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny 25 janoary teo, ny zanak’i Fianarantsoa”.
Tsiahivina fa anisan’ireo nanohana hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny faritanin’i Fianarantsoa. Nahatratra 67% ny mpifidy azy tany amin’ny faritra Atsimo-Atsinanana? ary maherin’ny 62% tany Matsiatra ambony tamin’ny fihodinana faharoa tamin’ny fifidianana filohan’ny repoblika taona 2013. Tsy kisendrasendra araka izany ny fanohanan’i zanak’i Fianarantsoa io drafitra natolotry ny filoha Hery Rajaonarimampianina io.
Ankoatra ity teny Ivato ity, dia hoentina hitety faritra ihany koa ity firaisan-kinan’ny Faritanin’i Fianarantsoa ity. Maro amin’ireo zanaky ny Faritra monina any Toamasina ohatra no nangataka ny hanaovana ny hetsika any an-toerana. Tonga nanome voninahitra ity lanonana ity moa ny solontena avy amin’ireo andrim-panjakana samihafa. Nomarihina tamin’ny fanehoana ny kolontsaina avy amin’iny faritra iny sy ny nofon-kena mitam-pihavanana izany.